လကျသညျးခှံ အရောငျကနေ သိနိုငျတဲ့ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေး – Justnow news
November 25, 2020 author Comments0Comment
မိနျးကလေးတှရေဲ့ထူးခွားတဲ့ အလှပတှထေဲမှာ လကျသညျးအလှပကလညျး ကိုယျခန်ဒာအစိတျပိုငျးတှထေဲမှာ အရေးပါဆုံး အရာတဈခုဖွဈလာတယျ။လကျသညျးအရောငျတှေ က သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးနဲ့ ဘယျလိုမြိုးပကျသတျနလေဲ?
သူ့အရောငျက ဖွူဖြော့ပွီး ပနျးရောငျအနညျးငယျသနျးသလိုလိုရှိလိမျ့မယျ။ကနျြးမာရေးသတိထားရမှာကတော့ ဆီးခြိူရောဂါ , နှလုံး နဲ့ ကြောကျကပျအသညျး ရောဂါတို့အဖွဈမြားတတျကွပါတယျ။ သူတို့တှကေ သှေးအားနညျးတယျ။သံဓာတျခြို့တဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ သှေးအားကောငျးအောငျ အစားသောကျစားဖို့လိုအပျပါတယျ။
လကျသညျးခှံ နီညိုရောငျ ဖွဈခွငျး
လကျသညျးခှံအရောငျက နီသလိုလို ညိုသလိုလို ရှိနမေယျဆိုရငျ သူက နှလုံးရောဂါသခြောပေါကျ ခံစားနရေမှာဖွဈတယျ။ဒါ့အပွငျ လကျသညျးခှံအောကျမှာ အဖွူရောငျ စကျဝိုငျးခုံးလေးလို လကျသညျးပှငျ့ရှိနမေယျဆိုရငျတော့ အရပွေားရောဂါ ဖွဈနိုငျတယျ။
လကျသညျးခှံအရောငျဝါတတျတာကတော့သကျကွီးပိုငျးတှအေဖွဈမြားကွပါတယျ။လကျသညျးခှံဝါနပွေီးတော့ လကျသညျးခှံကအလိုလိုကှဲလာမယျ။ဘာကွောငျ့ လကျသညျးဝါနရေတာလဲဆိုတော့ ဆေးလိပျသောကျလို့အဖွဈမြားတာပါဘဲ။အဆုတျ နဲ့ အသညျး ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျရပါမယျ။
ဒီလို လကျသညျးခှံအရောငျဖွဈနရေငျ အသကျရှူလမျးကွောငျးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ရောဂါအဖွဈမြားကွတယျ။
ဥပမာ အသကျရှူမဝဖူး ။နှလုံး နဲ့ အဆုတျ ရောဂါကို သတိပွုရပါမယျ။ပနျးနာရငျကွပျ နဲ့ တီဘီရောဂါ ရနိုငျခရြှေိတယျ။
သူတို့ကနျြးမာရေးတှကေတော့ လညျခြောငျးနာ လညျခြောငျးအကွိတျအဖွဈမြားတတျပွီး အစာအိမျရောဂါဝဒေနာ ဖွဈတတျပါတယျ။ရာသီဥတု အရ တုပျကှေးရောဂါ ငှကျဖြားရောဂါ ဖွဈတတျတယျ။
လက်သည်းခွံ အရောင်ကနေ သိနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး
မိန်းကလေးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ အလှပတွေထဲမှာ လက်သည်းအလှပကလည်း ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်ပိုင်းတွေထဲမှာ အရေးပါဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။လက်သည်းအရောင်တွေ က သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးပက်သတ်နေလဲ?
သူ့အရောင်က ဖြူဖျော့ပြီး ပန်းရောင်အနည်းငယ်သန်းသလိုလိုရှိလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးသတိထားရမှာကတော့ ဆီးချိူရောဂါ , နှလုံး နဲ့ ကျောက်ကပ်အသည်း ရောဂါတို့အဖြစ်များတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက သွေးအားနည်းတယ်။သံဓာတ်ချို့တဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သွေးအားကောင်းအောင် အစားသောက်စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လက်သည်းခွံ နီညိုရောင် ဖြစ်ခြင်း
လက်သည်းခွံအရောင်က နီသလိုလို ညိုသလိုလို ရှိနေမယ်ဆိုရင် သူက နှလုံးရောဂါသေချာပေါက် ခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင် လက်သည်းခွံအောက်မှာ အဖြူရောင် စက်ဝိုင်းခုံးလေးလို လက်သည်းပွင့်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ အရေပြားရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။
လက်သည်းခွံအရောင်ဝါတတ်တာကတော့သက်ကြီးပိုင်းတွေအဖြစ်များကြပါတယ်။လက်သည်းခွံဝါနေပြီးတော့ လက်သည်းခွံကအလိုလိုကွဲလာမယ်ဘာကြောင့် လက်သည်းဝါနေရတာလဲဆိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်လို့အဖြစ်များတာပါဘဲ။အဆုတ် နဲ့ အသည်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ဒီလို လက်သည်းခွံအရောင်ဖြစ်နေရင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါအဖြစ်များကြတယ်။ဥပမာ အသက်ရှူမဝဖူး ။နှလုံး နဲ့ အဆုတ် ရောဂါကို သတိပြုရပါမယ်။ပန်းနာရင်ကြပ် နဲ့ တီဘီရောဂါ ရနိုင်ချေရှိတယ်။
သူတို့ကျန်းမာရေးတွေကတော့ လည်ချောင်းနာ လည်ချောင်းအကြိတ်အဖြစ်များတတ်ပြီး အစာအိမ်ရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရာသီဥတု အရ တုပ်ကွေးရောဂါ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်။
Billboard ဂီတကျွမ်းကျင်သူ (၅) ယောက် သုံးသပ်ထားတဲ့ BTS အဖွဲ့ပိုပိုပြီး အောင်မြင်လာရခြင်းအကြောင်းများ
0 thoughts on “လကျသညျးခှံ အရောငျကနေ သိနိုငျတဲ့ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေး”